မလွဲတောင်လမ်းပိုင်း ယာယီဘေလီတံတား ထိုးခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီး၊ ယာဉ်များဖြတ်သန်းသွားလာနိုင် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဩဂုတ် ၁၆- မလွဲ တောင်လမ်းပိုင်းတွင် ယာယီဘေ လီတံတားထိုးခြင်း လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်ပြီးစီးပြီဖြစ်သဖြင့် မော်တော် ယာဉ်များ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန် ကြီးဌာန၏ ဩဂုတ် ၁၆ ရက် သတင်းထုတ်ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ရန်ကုန်-ရေး-ထားဝယ်-မြိတ်လမ်း၊ ထားဝယ်မြို့မှ မိုင်တိုင် (၈၀/၄) အကွာရှိ မလွဲတောင် ပေါ်တွင် လမ်းသားပြတ်နေသဖြင့် အရှည်ပေ ၁၂၀ရှိသော သံပေါင် ဘေလီတံတားကို ယာယီအသုံး ပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာ န တံတားဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက]]ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဆိုး ရွားတဲ့ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်း တာတွေကြောင့် ရန်ကုန်- ရေး- ထားဝယ်- မြိတ်လမ်းမှာ လမ်းပျက် စီးတာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ တောင်ပြို တယ်။ မလွဲတောင်- ထားဝယ် လမ်းပိုင်းမှာလည်း တောင်ပြိုတာ တွေဖြစ်ပြီး လမ်းပြတ်တောက်ခဲ့ တယ်။ အမြန်ဆုံး လမ်းပန်းဆက် သွယ်ရေး ပြန်လည်အဆင်ပြေစေ ဖို့ လမ်းအထူးအဖွဲ့၊ တံတားအထူး အဖွဲ့တွေနဲ့ တောင်ပြိုမြေတွေ ဖယ် ရှားရှင်းလင်းတာ၊ ယာယီဘေလီ တံတားအသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ယာယီဘေ လီတံတားကို တည်ဆောက်တဲ့အခါ မှာ ကားငယ်တွေကို ဩဂုတ် ၁၆ ရက် ကုန်ကားကြီးတွေကို ဩဂုတ် ၁၈ ရက် ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားတာ မှန်းထားတဲ့ အ တိုင်းလည်း အချိန်မီပြီးစီးပါတယ်}} ဟု ဩဂုတ် ၁၆ရက်က ပြောသည်။
ဩဂုတ် ၁၆ ရက် မွန်းလွဲ ၁၅ နာရီ မိနစ် ၃၀ အချိန်တွင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မလွဲ တောင်လမ်းပိုင်း ယာယီဘေလီတံ တားထိုးခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ပြီးစီးပြီဖြစ်သဖြင့် မော်တော်ယာဉ် များ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ပြီဖြစ် သော်လည်း လက်ရှိတွင် အိမ်စီး ကားငယ်များနှင့် ခြောက်ဘီးကုန် ကားများကိုသာ ဖြတ်သန်းခွင့်ပြု ထားပြီး (၂၄) တန်အထိ ကုန် ကားများကို ဩဂုတ် ၁၇ ရက်မှ သာ ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ゞင်းက ]]ဘေလီတံတားသံ ပေါင်ထိုးခြင်း လုပ်ငန်းအပြင် တောင်နံရံလမ်း မြေသားတိုးချဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းကိုပါ ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုကျခဲ့တဲ့တောင်ပြို မြေတွေကိုလည်း ဖယ်ရှားရှင်းလင်း ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်}}ဟု ပြောသည်။
ဂါဇာနယ်ခြား ပါလက်စတိုင်း ဆန္ဒပြသမားများကို အစ္စရေး စစ်တပ် ပစ်ခတ်၊ တစ်ဦးသေ ၂ဝဝ ကျော်ဒဏ်ရာရ
ယမန်နှစ်က အမှားများကို သင်ခန်းစာ ယူရမည်ဟု အူဘာမီယန် သတိပေး၊ မက်စ်တဲလားတွင် ရလဒ်ကောင်းပြန်??
မြန်မာ့ဂေါ်ဖီထုပ်များကို မြဝတီမြို့မှတစ်ဆင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တန်ချိန် ၁၅ဝ ခန့် နေ့စဉ်တင??
နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆု ရရှိသည့်အဖွဲ့က နျူလက်နက် ဖျက်သိမ်းရေး သဘောတူ စာချုပ်တွင် လက်မှတ်ထ??
”အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဝါသနာလည်း ပါတာကြောင့် တစ်ခုချင်းစီကို သေချာလုပ်သွားမှာပါ” ဇွန်သံစဉ်